Baradho sii kordhaya laga bilaabo abuur | January 2020
Bacriminta Nettle: nafaqada dhirta cagaaran
Ugu Weyn Ee Baradho sii kordhaya laga bilaabo abuur
Geedka baradhada wanaagsan: waa sax?
Waxaan u maleynayaa in badan oo idinka mid ah la yimid fikradda ah sababta maaddada ugu muhiimsan ee baradiidka baradho waa digriiga, oo ma aha miraha? Abaabulka abuurka isku dhufashada miyuu ku adag yahay qofka caadiga ah? Ama miyaan abuuraa shuruudo khaas ah ee koritaanka? Dhab ahaan, habkani waa mid aad u awood u leh qof walba, sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan.
Dumarka digaagga Forverk: dhammaan ku saabsan taranta guriga
Schlumberger wuxuu leeyahay noocyo iyo noocyo badan oo qoyskiisa ah
Sidee ayey u shaqeysaa iyo sida loo sameeyo ruux maskaxeed oo maskax ahaan loo isticmaalo gacmahaaga
Sida loo sameeyo hawo-qaadasho ee bakaylaha gacmahaaga
Goobta Feng Shui
Cows on beerta, sida xayawaanka kale ee xayawaanka, waxay ku xanuunsan karaan cuduro kala duwan. Si loo xakameeyo, waa in xoolaha xoolaha loo yeero, laakiin beeralay mas'uul ah ayaa mar walba ka hortagi kara horumarinta cudurka isaga oo qaadanaya tallaabooyin ka hortag ah. Waa maxay nooca cudurku yahay Teleasiosis? Read More
Waa maxay duqadda duqadda May ee raadineysa iyo maxaa?
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Baradho sii kordhaya laga bilaabo abuur 2020